Italy: Soomaali lagu tuhmayo inay maal-galiyeen afduubkii Silvio Romano(Aisha) oo la xiray. - NorSom News
Italy: Soomaali lagu tuhmayo inay maal-galiyeen afduubkii Silvio Romano(Aisha) oo la xiray.
R.W Talyaaniga iyo Aisha Romano
Afarta dhalinyarada ah laba ka mid ah waa Itoobiyaan, halka labada kale ay yahiin Soomaali, saddex ka mid ah waxaa da’dooda lagu sheegay 23-jir halka midka mid ah oo 29-jir ah xabsi guri lagu galiyay magaalada Milan oo ay dagan tahay Silvia.
Previous articleGabadha boqorka Norway: xiriirka Durek ayaa wax badan iga baray cunsuriyada.
Next articleSweden: Soomaali u sharaxan abaalmarinta darawalka sannadka 2020.